BlitzMetrics: Dashboard an'ny media sosialy ho an'ny marikao. Martech Zone
BlitzMetrics dia manolotra dashboard sosialy izay manara-maso ny angon-drakitrao amin'ny fantsonao sy ny vokatra rehetra amin'ny toerana iray. Tsy mila mitady metrika amin'ny sehatra sosialy isan-karazany. Ny rafitra dia manome tatitra momba ireo mpankafy sy mpanaraka anao ambony indrindra hanampiana anao amin'ny fananganana fahatsiarovan-tena amin'ny marika, ny firotsahana ary amin'ny farany - ny fiovam-po.
Fa indrindra indrindra, ny BlitzMetrics dia manampy ny mpivarotra hahatakatra ny fotoana sy ny atiny inona no mahomby indrindra mba hahafahanao manitsy ny fandefasanao hafatra arak'izay mahaliana ny mpankafy anao.
BlitzMetrics endri-javatra sy tombontsoa
Araho maso ny atiny manerana ny Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Tumblr
Miteraha tatitra manokana mahazatra.
Benchmark mifanohitra amin'ireo mpifaninana aminao.
Araho ny Nahazo sanda amin'ny haino aman-jery.
Ianaro izay demografika miasa izaitsizy.
Jereo hoe rahoviana ny atiny no misy akony lehibe indrindra.
Hatsarao ny fahombiazanao sy ny firotsahanao amin'ny alàlan'ny fanarahana ny zava-bita atiny.
Araho maso ny Newsfeed anao Taham-panotofana sy valiny.
Midira amin'ny data na aiza na aiza amin'ny data misy anao.
Tags: fampisehoana atinydashboardMponinatombam-bidy azo tamin'ny haino aman-jeryandraikitraFacebookmpankafytahan'ny fanehoan-kevitraInstagramtabilao sosialytabilao media sosialyTumblrTwitterYouTube
8 Jiona 2013 à 4:39
Doug– wow, misaotra amin'ny famerenana!
Miala tsiny aho fa tsy nahatsikaritra izany taloha.
Azafady ampahafantaro ahy raha misy fangatahana manokana anananao momba ny fomba hanatsaranay ireo dashboard ireo!